9 Amalungu omzimba owenzakalisayo ngokutshaya
Intlungu kunye nokudumba kumalungu akho? Abatshayayo batyekele ngakumbi ekufumaneni isifo samathambo (RA). Kwaye amayeza e-RA awasebenzi kakuhle nakubantu abatshayayo. Izazinzulu aren & rsquo uqinisekile.
Unokulindela imingxunya, kwakamsinya. Ukutshaya kukonyusa inkqubo yokuguga kolusu lwakho. Ingenza ukuba i-epidermis yomntu oneminyaka engama-40 ijongeke ngoluhlobo lomntu ongatshayiyo oneminyaka engama-70 ubudala. Lo monakalo awunakulungiswa kwaye unokwenza izifo zolusu ezininzi, ezinje ngomhlaza wolusu.
Ukukhanyisa kukwenza ukuba ube namaxesha okufumana ukonakala kwe-macular, imeko yamehlo etshabalalisa umbono ophambili ofuna ukuwufunda, ukubhala, kunye nokubona ubuso babanye abantu. Ukwanamaxesha ama-3 okuba uphuhlise i-cataract, ebangela umbono ocacileyo.
Amalungu akho ezesondo
Kuchanekile: Amadoda atshayayo athambekele ngakumbi ekufumaneni ukungasebenzi kakuhle (ED). Kwaye okukhona utshaya, kokukhona kunokuba kubi ngakumbi. Amadoda atshayayo athambekele ekubeni nomhlaza wamatyhalarha. Kwaye iimbaleki zabasetyhini zithambekele ngakumbi ekufumaneni umhlaza womlomo wesibeleko.
Ithenda, iintsini ezophayo; halitosis ebuhlungu! Isifo seentsini sesona sizathu siphambili sokuphulukana namazinyo. Ukuba uyatshaya, ke ngamaxesha ama-2 ukuba ubenakho, kwaye okukhona utshaya, kokukhona uphezulu umngcipheko.
Ukuba uyatshaya, ke ungaphezulu kwamaxesha ama-3 ngokunokwenzeka ukuba ubethwe sisibetho -igazi egazini elinokubangela nayiphi na imiba, kubandakanya ukukhubazeka ebusweni, ukungaboni kakuhle, ukuhamba nzima, kwaye ngamanye amaxesha ukufa. Ukulungele ukuba nenqanaba loxinzelelo lwegazi, elinokuthi likhokelele kwi-aneurysm yecerebral. Yilapho udonga lwesitya segazi kwingqondo yakho iibhaluni ngaphandle. Isenokuvuza okanye iqhume ize ifake igazi kwizihlunu ezikufutshane.
Izilonda ze-Peptic, i-Crohn Disease, i-colon polyps, i-pancreatitis (ukuvuvukala kwi-pancreas), kunye nomhlaza wepancreas zizifo ezininzi ezinxulumene nokugaya ukutya onokuthi ufumane xa utshaya. Uneminyaka engama-35 ulungele ukufumana uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela, esichaphazela isibindi sakho kunye ne-pancreas.
Umhlaza wemiphunga-onxulunyaniswe neepesenti zokutshaya kwexesha-sesona sizathu siphambili sokubulawa komhlaza e-US emadodeni nakwabafazi ngokulinganayo. Ukutshaya kukwenza yonke eminye imihlaza ukuba ibekho, njengomhlaza womlomo, isibindi, izintso, isinyi somchamo, ipancreas, isisu, ikholoni kunye nomngxuma. Kwaye sesona sizathu siphambili seCOPD (isifo esinganyangekiyo semiphunga), iqela lezifo ezonakalisa iingxowa zomoya ezincinci emiphungeni.
Ukutshaya ngunobangela obalulekileyo wesifo se-coronary, apho abantu abaninzi e-US babulawa ngumhlaza ngokudibeneyo. Iyakhawulezisa kwaye inciphise imithambo yakho, kwaye ibangela ukuba igazi lakho liqine kwaye lijiye, oko kunokukhokelela kwi-myocardial infarction.